Jiifto | HIGIL
Category Archives: Jiifto
Inteenna garanaysa, hoobal iyo abwaan (amma hobwaan) Sugaal Cabdulle Cumar—kii yiri, lur ba waxad ku daysaa, labadii walaala ah, midki lagaclahaa weyne—waa waddani Soomaaliyeed, kaas oo ku maansooday, Soomaali badaney, bulshadii wacnaydey: intaan ba’iyo hoogiyo, boqongooyo weyn dhicin; baaxaddiinnu kala tegin; waddankeenna baadka leh, dhawr baarta laga dhigin; waa bilic xorriyadduye, intaan magacu baabbi’in; intaan bala gudaysoo, … Sii akhri →
Posted on Isniin, Abriil 20, 2009 by Jidhidhico	• Faallo u dhaaf
Maansooyinkii xiisaha badnaa ee Abwaan Ibraahim Cajaa’ib eyey maansadanna ku ladhantahay. Waa maax ceel aad u dheer salkiisa heehaabaysa, waana aag-suugaaneed aan la mudmudi kerin. Waa sarbeeb isasaaran, masasaarkeeduna waa boog dahsoon, oo qofkii xaalka Soomaaliyeed u dhuun duleela uunbaa dhayi kara. Waa maansadaa mucjiska ah, ina tusaysana in Abwaanku goonni u yahay farsahaxanka dadan, … Sii akhri →
Posted on Axad, Febraayo 15, 2009 by Jidhidhico	• 3 Faallo
In qof kula deegaan iyo diin ah, dagaalna idin dhexmarin, balse in badan kaa dun fiican, aad ximiso, dar-xumadiisana aad ka taliso, iskana indha-saabto in dulqaadka uu qofkaasi kuu hayo nabaddaadu ku dhisantahay, kuna dul nooshahay, waa arrin qof Muslin ah oo fekaraya aan u suurtoobin. Balse Soomaalida dhexdeeda arrinkan waa dabeeco, walina dad ayaa … Sii akhri →